Yamukela iNxusa lase-Uganda eChina ukuvakashela iSinocare-News-Sinocare
Yamukela iNxusa lase-Uganda eChina ukuvakashela iSinocare
Isikhathi: 2021-06-10 Hits: 54
NgoJuni 7, uChrispus Kiyonga, inxusa lase-Uganda eChina, u-Alice Kiyonga, inkosikazi yenxusa lase-Uganda eChina, noWilberforce, iphini lenhloko ye-Embassy yase-Uganda eChina · Wilberforce Mugisha noPhilip Kanyoonzi, uNobhala Wokuqala weNxusa lase-Uganda eChina, uvakashele iSinocare. UXinyi Li, umsizi kasihlalo weSinocare, no-Alvin Xiang, umqondisi woMnyango Wokuthengisa Wamazwe Omhlaba eSinocare, babambe iqhaza ekwamukelweni futhi baqhuba izingxoxo ezijulile ngezimo zebhizinisi zaphesheya kwezilwandle.
Inxusa lase-Uganda kanye nethimba labo bahambele ihholo lombukiso laseSinocare futhi bafunda ngomlando weSinocare wokuthuthuka nochungechunge lwemikhiqizo ngokuningiliziwe. Phakathi kwazo, imikhiqizo yezinkampani ezimbili zaseMelika iSinocare eyabamba iqhaza ekutholakaleni ngo-2016 ihehe inxusa lase-Uganda ngenxa yemikhiqizo yabo ethengwa kakhulu phesheya kwezilwandle.
Emhlanganweni olandelayo wokushintshana, u-Alvin wethula inxusa lase-Uganda ethimbeni lomqondo weSinocare womhlaba wonke wentuthuko nentuthuko, kanye nesimo samabhizinisi aphesheya e-Afrika. Ngalesi sikhathi, inxusa uChrispus Kiyonga wayekhathazeke kakhulu ngenqubekela phambili yebhizinisi leSinocare e-Uganda futhi wayekuqonda ngokujulile lokhu, ikakhulukazi ukusetshenziswa kwemikhiqizo kashukela egazini endaweni yangakini.
Ubalule ukuthi izinga lemfundo yeziguli ezinesifo sikashukela e-Uganda liphansi ngokwedlulele, futhi kudingeka imizamo yazo zombili izinhlaka ukwenza ngcono izinga lemfundo likashukela. Siyethemba futhi ukuthi iSinocare izohlinzeka abasebenzisi bendawo ngemikhiqizo esebenzayo nebiza kakhulu ukusiza iziguli ezinesifo sikashukela zendawo ukuqapha nokuphatha ushukela wegazi. Mayelana nalokhu, ngemuva kokubonisana phakathi kwala maqembu womabili, avumelana ngokuhlela ukuhlolwa kwamahhala kweglucose nemisebenzi yokufundisa ngesifo sikashukela e-Uganda ngokusebenzisana ezingeni likahulumeni.
Ngesikhathi sokushintshana, la maqembu womabili akhulume ngobhadane olusha kakhulu lomqhele pneumonia phesheya kwezilwandle. Ngemuva kokuzwa ukuthi iSinocare yethule imikhiqizo emisha yokuhlola ukulwa nomqhele kanye ne-antigen, uMmeli uChrispus Kiyonga wathi uzoqhubeka nokunaka i-Uganda. Izidingo zokuhlola zasendaweni ze-COVID-19, ngokufanelekile, zethula imikhiqizo yokuhlola esheshayo nephumelelayo.
Ikhasi Langaphambili: Usuku Lokuzalwa Oluhle ｜ Sinocare Anniversary ye-19
Ikhasi elilandelayo: I-SARS-Cov-2 Antigen Test Kit & Neutralizing Antibody Test Kit zivunyelwe Ukuthekelisa